အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏ပထမ၊ ဒုတိယနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထိုင်ဝမ်မြီးကောင်ပေါက်များအပေါ်ဆန်းစစ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
အရှင်-Hwei Loa*, ဝေသို့ပွေးလေ၏b & Hsiaomei ဝူc
စာမကျြနှာ 90-103, မှတ်တမ်းဗားရှင်းပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ: 17 မတ်လ 2010
Received: 28 နိုဝင်ဘာ 2008
ညစ်ညမ်း၏ရိုးရာပုံစံများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကသုံးစွဲသူများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့, ထိုင်ဝမ် 1688 မြီးကောင်ပေါက်များ၏စုစုပေါင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်.
ပို. အရေးကြီးသည်, တွေ့ရှိချက်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုကြောင့်အသုံးပြုသူများအများတွင်သက်ရောက်မှု desensitizing မှုကြောင့်ပြသမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများအပေါ်လျော့နည်းအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းများ၏ပျက်ဆီးရိပ်မိခဲ့ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထိတွေ့, အဆိုးကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ကန့်သတ်များအတွက်ကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်ကိုရိပ်မိထိခိုက်မှုအပြုသဘောကန့်သတ်များအတွက်ကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ပထမဦးဆုံးနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ဒုတိယ-လူတစ်ဦးကြိုးသကျရော) ၏ပူးတွဲသက်ရောက်မှုတတိယလူတစ်ဦးအမြင်ထက်အမူအကျင့်ရည်ရွယ်ချက်ကို၏တစ်ဦးထက်ပိုယုံကြည်စိတ်ချရသောခန့်မှန်းအဖြစ်ပြသခဲ့ကြသည်။ တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းအပေါ်ကန့်သတ်များအတွက်အထောက်အပံ့သိသိသာသာနဲ့ Non-သိသိသာသာခန့်မှန်းနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်တတိယလူတစ်ဦးအမြင်အစီရင်ခံကြောင်းအတိတ်သုတေသနအတွက်ဆန့်ကျင်ဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးသည်။